Mmemme Akwụkwọ Nsọ nke Sukkot
Sukkot, mmemme nke ụlọikwuu, bụ oge “owuwe ihe ubi nke mkpụrụ mbụ nke ubi gị”; ya mere, a makwaara ya dị ka Chag Ha'Asif, mmemme mmemme. Enwere ike ịghọta nke a na ọkwa eke, nkeonwe na nke akụkọ ihe mere eme. N'ime ụwa anụ ahụ, t ...
Greenhouse kacha mma
Kachasị Obere Greenhouse Maka ndị hụrụ ubi n'anya ma hụ ụdị osisi, ị ga -achọta ụzọ iji soro ha chọọ ụlọ gị mma n'agbanyeghị ihe ọ bụla. Ọ bụ ezie na ị nwere ike idobe okooko osisi n'ime ite ite ma ọ bụ ihe ọkụkụ dị nso na windowsill n'ime ụlọ gị, ọ bụrụ na ị nwere obere ụlọ, ị nwere ike nwee ...
Cheap PE Film Tunnel Greenhouse Taa, ọ ga-amasị m iwebata griin haus nke ihe nkiri ihe nkiri-PE dị ọnụ ala. Ewubere site na polyethylene UV na-adịgide adịgide, ịdị arọ dị arọ, ọwara a siri ike ma sie ike .Okpu nchara galvanized bụ ihe nchara na-adị mfe ma banye n'ime ala iji chekwaa ...
Ịre ahịa kacha mma - ụlọikwuu otu pati PVC na -eguzogide ọkụ
site na nchịkwa na 21-01-23
Kasị erere -Ụlọ ndò PVC na -eguzogide ọkụ na -adị ugbu a, onye na -ere anyị kacha mma bụ ụlọ ezumike otu PVC na -eguzogide ọkụ. Ụlọ ntu otu PVC a abụghị nke nkịtị, n'ihi na etinyerela ihe mkpuchi ọkụ na akwa PVC, nke na-ezute ọkọlọtọ NF P92-507 M2 nke SGS gafere. Mgbe ị na -ezukọ ma ọ bụ na -eme oriri ...
Ọbịbịa Ọhụrụ na-eje ije na Coop Coop
New Arrival-Walk in Chicken Coop Taa, ọ ga-amasị m iwebata ngwaahịa ọhụrụ-Walk in Chicken Coop Nke a dị mma maka idobe ọkụkọ dị n'ime obere ụlọ na nnukwu azụ, na-egbochi ọkụkọ ịkpafu, na-enye mmiri ozuzo na nchekwa anyanwụ na idobe ya. ọkụkọ mma si predat ...
Ụlọikwuu Nnọkọ Mmekọrịta - Ụlọikwuu Mmemme Nkiri
Ụlọikwuu Nnọkọ Mmekọrịta - Ụlọ Nkiri Ihe Nkiri Edemede Taa, ọ ga -amasị m iwebata ụlọ ntu ọhụrụ - ụlọ ihe nkiri ihe nkiri na -apụ apụ. Ogige oriri a abụghị naanị nwere njiri mara ụlọikwuu oriri nkịtị, kamakwa enwere ike iji ya dị ka griin haus. Yabụ, ọ bụ ọrụ dị ọtụtụ ...
Atụmatụ na ngwa nke griin haus
site na nchịkwa na 20-04-15
Njirimara na Ngwa nke Greenhouse Greenhouse bụ ụdị ngwaahịa a na-ejikarị eme ihe.Ọ dị mma maka ndị na-anụ ugbo ụlọ na ndị ọrụ ugbo na-achọ ụzọ ha ga-esi nọrọ n'ime ala n'afọ niile. ngwaahịa ndị metụtara ya ma weta ...
Njirimara na Ngwa Oflọikwuu Nnọọ
Njirimara na Ngwa nke Tent Party Tent Party bụ ụdị ngwaahịa a na -ejikarị eme ihe. Ngwaahịa a nwere ike igosipụta ịdị mma nke ngwaahịa ndị metụtara ya ma weta enyemaka nke ka mma na ndụ anyị. Mgbe ahụ kedu atụmatụ na ebe anyị nwere ike itinye ya n'ọrụ. 1. Ojiji dị iche iche Ndị otu anyị iri ...
Ngwa enyemaka mberede maka nchedo gị ka mma
Ngwongwo ihe mberede maka nchekwa gị ka mma Dongtai City Winsom Outdoor Product Co., Ltd. tọrọ ntọala na 2010. Dị ka onye nrụpụta ọkachamara, ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị nwere ahụmịhe ogologo oge afọ iri n'ahịrị a, ọkachamara na ụdị ụlọ ntu na gazebos dị iche iche. dị ka mmefu ego party tent, sukkah t ...